बारा पर्सा हावाहुरी : प्रभावित गाउँहरू उजाड, पीडित अन्योलमा ! - बारा पर्सा हावाहुरी : प्रभावित गाउँहरू उजाड, पीडित अन्योलमा !
बारा पर्सा हावाहुरी : प्रभावित गाउँहरू उजाड, पीडित अन्योलमा !
२०७५, १८ चैत्र, 06:08:52 PM
काठमाडौं । आइतबार साँझ आएको असिना पानीसहितको हावाहुरीले बारा र पर्साका प्रभावित ठाउँ उजाड देखिएका छन् । यतिबेला हावाहुरीमा परि आफन्त गुमाएकाहरू घरमै रोइरहेका छन् ।
पुरैनियासहित अति प्रभावित बाराको फेटा, भरवलिया, र चैनपुरमा मानिसहरू अब के खाने र के लगाउने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । गाउँमा भित्र्याउने बेला भएको गहुँ सबै असिनापानीले नष्ट गरेको छ। मानिसहरूले रातभरी डरका कारण सुत्नसम्म पाएका छैनन् ।
रातिदेखि नै उद्धारका लागि खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू पनि गाउँमा बसेर मानिसहरूको उद्धार गरिरहेका छन् ।हावाहुरीका कारण जस्तासंगै उकिएका सिमेन्टका घर पनि ढलेका छन् ।
ती क्षेत्रमा घरहरू ढल्नुका साथै सानादेखि ठूला सबै रुखहरू जरैसम्म उखेलिएर ढलेको देखिन्छ। धेरै ठाउँमा बिजुलीका खम्बा ढलेका छन् । त्यस क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द छ ।
घाइतेहरूको अवस्था दयनीय छ। हावाहुरीको डर मानिसहरूको अनुहारमा अझै देखिन्छ। अस्पतालमा भर्ना भएका र बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका बिरामीहरू आफ्ना आफन्तहरूलाई के भइरहेको छ भनेर चिन्तित छन् ।
तीमध्ये केही उपचार गरेर घर फर्किएका छन् भने धेरै चाहिँ उपचाररत छन्। बिरामीमध्ये केहीको टाउको, खुट्टा, पेटलगायतमा चोट लागेको देखिन्छ। र, ती अधिकांश आफ्नै घरभित्र रहेका बेला घाइते भएका हुन्। घटना भएलगतै विभिन्न संघसंस्थाले राहतका सामग्री लिएर गइरहेका देखिन्छन्।
भारतमा वर्षा र हावाहुरीबाट ३१ को मृत्यु, नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह !
आज देशका केही भागमा चट्याङसहित वर्षा र असिना पानीको संभावना !
आज पश्चिमी भूभागमा मेघ गर्जनसहित असिना पानीको सम्भावना
हावाहुरी प्रभावितलाई ग्लोबल आइएमईले दियाे भाँडाकुँडा राहत